जुम्लामा किसानमाथि बज्रपात : चट्याङले ६ लाख रुपैयाँका भेडा म,xरे ! – Taja Khawar
जुम्लामा किसानमाथि बज्रपात : चट्याङले ६ लाख रुपैयाँका भेडा म,xरे !
प्रकाशित मिति: बुधबार, आश्विन १३, २०७८ समय: १३:०५:३३
सोमबार राति १० बजेतिर परेको चट्याङले ४० वटा भेडा म’,xरे’प’छि गुठीचौका किसान चिन्तित भएका छन् । जुम्लाको गुठीठचौर गाउँपालिका ४ मा रहेको डाबा लेख भन्ने पाटनमा चट्याङ लागेर ४० वटा भेडा म’xरे’xका हुन् । चट्याङका कारण १५ वटा भेडा घा’इ’ते’ भएका छ्न् ।
उक्त पाटन बर्खायामको समयमा सबै भेडा किसानको भेडा पाल्ने क्षेत्र हो । त्यहाँ गुठीचौर गाउँपालिकाका चार जना भेडा किसान र २०० भेडा थिए । किसानका अनुसार साढे छ लाख रुपैयाँ बराबरका भेडा मरेका छन् । भेडा मरेपछि स्थानीयको दैनिकी चलाउने आय स्रोत समेत नभएको किसान मुणिप्रसाद अधिकारीकाले बताए ।
भेडा भएका ठाउँमा परेको च’ट्या’ङ’ले भेडापालक किसानमाथि बज्रपात परेको गुठीचौर गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अम्मराज गिरीले बताए । उनले भने, ‘विपद् कतिबेला आउँछ, थाहा हुँदैन । हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ । गुठीचौर क्षेत्रका अधिकांश नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत भेडापालन नै हो।’
उनले भेडा पालक किसानहरूलाई राहतका लागि गाउँपालिकामा छ्लफल गर्ने बताए । च’ट्या’ङका कारण भेडा म’xरेx’प’छि भेडा पालक किसानको जीविकोपार्जन समस्या आएको उनको पनि भनाइ छ ।
Last Updated on: September 29th, 2021 at 1:05 pm